Repost: HE DIED BUT HIS PROPHECY STILL RESONATES (listen to the videos) – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooRepost: HE DIED BUT HIS PROPHECY STILL RESONATES (listen to the videos)
HE DIED BUT HIS PROPHECY STILL RESONATES (listen to the videos)
By Worku Gadissa, April 5, 2018
Must listen to video
Robe Bale Oromia-Roobee Baalee Oromiyaa
Dur dur Tokkummaa Qabsaawoota Baalee fi Dhaaba Maccaa fi Tuulamaa
Bara Oromoon wal beeke,bara saayinsii fi teknoolojiin guddatee odeefanno sakandii tokko keessatti waliin dhaqqabuun danda’amu kana keessatti dhaabbileen siyaasa Oromoo bakka garagaraatti ciccittanii wal qabachuu dadhaban. Dur waggaa shantama dura,bara oromoon wal hin beeknetti,bara wal qunnamtii uumanii odeefannoo wal jijjiruun akkaan rakkisaa ta’etti qabsaa’onni Baalee fi Hogganttooni Maccaa fi Tuulammaa wal qunnamanii tokkummaa uuman. Wal qunnamtii kanaafis gahee guddaa ka taphatan Haaji Aadam Saaddo ti. Bara san keessa miseensonni Maccaa fi Tuulamaa warra muudaaf deemu fakkatanii Dirree Sheek Huseen dhufuun gama Haaj Aadam Saaddotiin qabsaa’ota Baaleetiin wal arganii waaye qabsoo hidhannoo mari’ataa turan. Baruma kana keessaa Ulama’onni Roobee muudni gara Dirree Sheek Huseen godhamu amantii Islaama keessatti hin hayyamamu jechuun ummata barsiisaa turan. Jiddu tana Ulama’ni kabajamaa fi beekkaman tokko Haaji Aadam Saaddotiin “maalif muuda Dirree Sheek Huseen Deemu itti fufte?” jedhe gaafateen.
Haajiinis aariidhaan akkana jedhaniin “Callisi maal akka nu hojjannu eessatti beeytaamiti,nu dhagaa yookiin mukatti amanaa hin jirru, Sheek Huseen Rabbi jedhaa hin jirru. Garuu Oromoota biraatiin wal arguu qabna,waajjira wahiitu hin qabnu,galmee raga barreefamaa wahiitu hin qabnu,karaa biraa kan ittiin wal qunnamnu kamiyyuu hin qabnu kanaafu Dirree Sheek Huseenitti wal arguu qofa” .
Dirree Sheek Huseen hambaa seenaa Eenyummaa,Aada fi Siyaasa Oromoo turte,sabboontonni qabsoo Oromoo fi hayyoonni seenaa kan dhalootaan Baale ta’an dabalatee dhiibbaa Ulamaa’ota Roobeetin Dirree Sheek Huseen irratti godhame yeroo qeeqan ni mul’ata.
Haaji Aadam Saaddo miseensa Maccaa fi Tuulamaa, fi akka Baaleetti itti gaafatamaa bakka bu’aa dhaabbatichaa turan, bara san keessa Baale keessa miseensonni dhaabbatichaa muraasni Ismii Abbaa Washaa (Hisuu), Haaj Huseen Suraa fi Haaji Aliyyi Haaji Jaarsoo yaadachuun ni danda’ama. Barreefamni armaan gadii barreefama xalayaa Hoggantoonni Maccaa fi Tuulamaa, fi qabsaa’onni Baale yeroo garagaraatti waliif barreessan uf keessaa qabata.
XALAYAAN ARMAAN GADII MACCAA FI TUULAMA IRRAA QABSAA’OTA BAALETIIF ERGAME.
Xalayaa kana kan barreesse Liwtinaant Maammoo Mazamir ture. guyyanis September 10,1965
“Seena ilma namaa irraa akka hubatamutti ummattoonni osoo du’a hin sodaatin bilisummaa fi birmadummadhaaf qabsaayan yeroo hundaa ni injifatu…jiruu fi qabsoon du’aa ummattoota cunqurfamoo impaayera itoophiyaa keessatti ol’aantummaa amaara fi fakkaatoonni isaani sirna impeeriyalizmii Ameerikatin deeggaramuun geeggesan irratti qabsoon ummattoonni cunqurfamoon miliyonaan lakkaawaman godhan Qabsoo Addaati…. Uf duratti ummattooni cunqurfamoon bifa dhaabbileen wal gurmeesani sirna cunqursaa kanas sirriti gadi fageenyaan waan hubataniif qabsoon ammaa kun ni babal’ata. Marii kanaan dure goone irratti akka hubattanitti sosochiin dimokraatawa Maccaa fi Tuullamaa kan jalqabameef Ummanni Oromoo akka uf beeku gochuudhaafi, Haala qabatamaa amma jiru kana ilaallatee halkanii fi guyyaa waan dandeennu hunda gochutti jirra. Maqaa isinii dhahuuf qaamni Maccaa fi Tuullamaa ka humna qawwee hidhate sosochii biyyoolessaa kan fedhii fi hawwii ummata Oromoo bakkaan gahu qindeessutti jirra. Isin ummanni Baale qabsoo gootummaa itti jirtan itti fufaa, haga dhiigni keessan cophee dhumutti lafa Oromiyaa taakkun tokko osoo hin hafin diina irraa lolaa. humni waraana warra mpeeriyalistii, ziyoonistii fi cunqursitoota kara hundaan isinitti duulanis lolli falma waraana isin itti jirtan murteessadha, ni injifattus. Nu karaa dandeenne hundaan isiniin wal qunnamtii uumuuf ni carraaqna.”
XALAYAAN ARMAAN GADII QABSA’OTA BAALEE KAN JENERAAL WAAQOO GUUTUTIIN HOGGANAMU DIRREE WARAANA DALLOO IRRAA HOGGANTOOTA MACCAA FI TUULAMAAF ERGAME
Waldaa Maccaa fi Tuulamaatiif
Qabsaawoota bilisummaa Oromoo-Baale,Jeneraal Waaqoo hogganamtu Dallo irraa.
Nageenyi keenna isin haagahu. Ummata Oromoo Shawaa fi bakka biraa jiraatu hundaan nagaya keenna nuuf gaha. Nu Oromoonni Baalee gabrummaa amaaraa jalaa baahuuf qabsoo hidhannoo erga eegalle waggaa afur fin’eerra..Nu karaa Dallootiin qabsoorra jirra, Kara Bahaa-Awuraaiiaa Waabeetiin generaal Huseen Buneefaa itti jiran. Wanni akka isin nuuf gootan isinirraa eegnu.
Waraana haylasillaaseen nutti duulchise keessaa irra guddaan ijoolle teessan, wallagga, Jimmaafi kanneen birooti. Ijoollee teessan waraana diinaa ta’anii akka nutti hin duulle nurraa dhaaba.
Isin qabannee isaanis (ijoollee wallaalaan waraana diinaa taate) sirreessuu ni dandeenna.
Carraa qabdaniin qabsoon keenna addunyatti akka beekamtu nuuf godhaa.
Ijoollee baratte ta waa nu gargaartu nuuf erga.
Waan hundarratti bal’innaan akka wajjiin mari’annu namoota keessan nuu erga.
Olola dharaa Ammaarri nurratti oofu-nu abbaa biyyummaa keennaa waakkate shiftoota, Soomaale nuun jedhu kijiba ta’uu ummata oromoo hundatti nuuf himaa. Nu amantiin keenna Islaamaa ta’us, oromoo ta’uu keenna hubadhaa.Soomaaleen amantiin wal fakkaanna malee, sabaan adda ta’u keennas beeka. Nu ka lolaa jirruuf biyya teennaafi male, ta Somaaleetifi miti. Kana ummata keenna hundatti nuf himaa.”
Qabsaa’ota Baalee keessaa xalayicha irratti kan mallatteessan.
Hoggansa waraana Olaana irraa
Jeneraal Waaqoo Guutu
Koloneel Haaji Aliyyii Cirrii Jaarraa
Koloneel Aadam Jiloo
Koloneel Dubroo Waaqoo
Manguddoota hoggansa keessaa ammo
Haaji Goobanaa Yuuboo
Koloneel Cirrii Jaarraa
Koloneel Waaqoo Shaaqee
Saadiq Roobaa fi walumaa galatti namoota haga 15 ta’u
Haaji Huseen Suraa(xalayicha harka isaanitiin ka barreesse)
XALAYAAN ARMAAN GADII QABSA’OTA BAALEE KAN JENERAAL HUSEEN BUNEETIN HOGGANAMU DIRREE WARAANA HAWAAXXUURRAA HOGGANTOOTA MACCAA FI TUULAMAAF ERGAME
“Waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi ummata Oromoo Shawaa keessa jiraatu hundaaf
Nageeenyi keenya isin haa gahu. Dirree qabsoo bilisummaa Baalee Hawwaaxxuurraa”
Oduun keessan akka nu gahetti gurmooftanii sochiirra jirtanii dhageenne. Nu gama keennan qabsoo bilisummaa eega eegallee waggaa afressoo keessa jirra. Halkanii guyyaa waraana amaara jeneraal Kabbdaa Yaaqoob jedhamu hogganuun wajjiin wal falmaa jirra. Qabsoon keennas uf duuba hin deebi’u. Biyya keenna irratti gadi aantummaan jiraachu hin feenu. Murteen keennas bilisummaadha. Yoo isin nuuf tumsitan ni biisoomna. Ummata Shawaa keessa jiru hundatti waan nu keessa jiru nuuf labsaa. Gurmuu nu ta’a
Waraana Imaan oromoo amaarri gowwoomsee nurratti achii duulchisu nurraa dhaaba.
Olola dharaa Somaale nuun jedhu akka dhugaa hin ta’in ummataaf himaa.
Namoota baratan bilisummaaf nu wajjiin dhaabbachuu danda’an dandeetti hoggansaa qaban nuuf ergaa. Nu gama keennaan gargaarsa Rabbitiin qabsoo eegalle Baalerraa gara Harariifi biyya Dida’a(Arsii) ni bal’ifna. Isinis bakkuma jirtanii eegalaa.
Waan nu keessa jirru biyya alaatti nuuf beeksisa. Gurra Faranjii nuu buusa.
Haala maanguddoonni keessani fi hoggantoonni keenna wal arganii itti mari’atan nuuf uumaa. Wal qabannee haqa keenna deeffachuuf jabaanne haa qabsoofnuun dhaamsa qabsaawoota Baalee hundaati. Nageenyi isin wajjiin haa jiraatu.
Jeneraal Huseen Bunee Daraara
Koloneel Abdullaahi Badhaasoo
Ismii Abbaa Washaa
Haaji Aliyyii Jaarsoo
Haaji Usmaan Imaamaa
Hogganaan Maccaa fi Tuulamaa Jeneraal Taaddasaa Birru waraanaan qabamanii to’annaa jala oolfamanii turan. Manni isaani humna waraanatin sakata’amaa osoo jiru jiddu tana Xalayicha Baale irraa Haaji Aadam Saaddoo fuudhanii gara Finfinnee dhufan,Haajiin hidhamuu Jeneraal Taaddasaa Birruu quba waan hin qabneef gara mana Jeneraal Taaddasaa Birru bilbilan, hogganaan waraana mana sakkata’aa jiru sagale Jeneraal Taaddasaa fakkeesse wajjiin haasaye, haajii wajjiin wal arguuf naannoo ministeera bulchiinsa biyya keessaa/agargizaat kan yeroo ammaa ‘immigireshinii’ jedhamutti beellama qabatan. Akka kanaan borumtaa Haajiinis human waraanittin marfamanii qabamanii gara mana poolisaa geeffaman, wayta moora buufata poolisi gahan Haajiin mala dhawan, poolisootaan mana fincaani na geessa jedhaniin, poolisoonnis geessaniini balbala mana fincaani irra dhaabbatan, yeroo kana haajiin iccitiin qabsaa’otaa akka hin baane gochuuf waraqaa xalayichi irratti barreefame tatarsaasanii alanfachuutti seenaan, jidduu tana ajaajan waraana biiro gadi bahee poolisotaan haaji karam geessitan jedheen, poolisoonnis akka mana fincaani jiran itti himan,ajajaan waraana akkamitti osoo hin sakkata’in adda isaani gadi dhiistan jedhee utaale mana fincaani yeroo seenu haajiin waraqata haga harkatti hafe cicciranii alanfachutti jiru. Ajajichi human biraa waamatee osoo asii-achi gara biiroo fidatan.achittis haajiin jalaa hin laafne wal daddarbaa jabaatte keessa shuguxi Haajiin koolti 38 bobaa karaa bitaatin fannifatan lafa buute. Haga hafte ajajichii fi warri isa wajjiin jiran rifatan.sanuma keessa waraqaa afaan keessatti hafe alanshaa turan.guutumaa guututti alanshanii eega liqimsan booda, tooridaan shuguxxi wajjiin bobaa kara mirgaan hidhatan lafa jalaa bu’e.eega iccitiin qabsaa’otaa diina harka seenu dhabuu mirkaneefatan booda “Waan garaa keennaa nu bahe garatti deebifadhe,amma waan feetan fidaa” jedhaniin.
Mamo Mezemir Died But His Prophecy Still Resonates (listen to the videos)
Mamo Mezemir Died But His Prophecy Still Resonates (listen to the videos) Lt. Mamo Mezemer,…
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Ebla 5, 2019